Britain oo ciidamo horudhac ah u dirtay Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Dowladda Britain ayaa ciidamo horudhac ah geysay Soomaaliya, si ay u taageeraan howl galka AMISOM.
Ciidamadan oo gaaraya 10 askari ayaa ka degay magaalada Muqdisho, iyadoo ay xigi doonaan 70 kale oo askari ah.
Xoghayaha Gaashaandhigga Britain Micheal Fallon ayaa sheegay in ciidamada Britan ka socda ay taageeri doonaan Ciidamada AMISOM.
Ciidamadan ayaa la sheegay inay dhinaca caafimaadka iyo taageerada dhinaca lojistikada ay siin doonaan Ciidamada AMISOM.
Ciidamadan ayaa gacan ka geysan doona xasilinta iyo dagaalka lagula jiro Argagixisada, waxaana la sheegay in aanay ka qeyb qaadan doonin dagaalada tooska ah, hase ahaatee hadii la soo weeraro ay is difaaci doonaan.
Xukuumadda Britain ayaa sanadkii la soo dhaafay shaacisay in illaa 80 askari oo isugu jira qubaro iyo la taliyeyaal ciidan u direyso Soomaaliya, si ay u taageeraan howl galka AMISOM.